အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ Cranberries အဖွဲ့ရဲ့အဆိုတော် Dolores O’Riordan
On January 16, 2018 January 22, 2018 By Atsuko
Irish အဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cranberries ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဆိုရှင်ဖြစ်သူ Dolores O’Riordan ဟာ တနင်္လာနေ့တုန်းက ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ဘာကြောင့်သေဆုံးရတယ်ဆိုတာကို မသိရှိရသေးပါဘူး။ သူမရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Lindsey Holmes က သူမဟာ လန်ဒန်မြို့မှာ အသံသွင်းဖို့ကိစ္စနဲ့ရောက်ရှိနေတုန်း ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိအချိန်မှာ သူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေက အရမ်းဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့အတွက် လောလောဆယ်တော့ ဘာမှမေးမြန်းခြင်းမပြုသေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း O’Riordan ရဲ့ခန္ဒာကိုယ်ကို Park Lane ဟိုတယ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင် သေဆုံးရခြင်းရဲ့ဇစ်မြစ်ကို အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း ထပ်ဆောင်းပြောကြားထားပါတယ်။
အိုင်းရစ်သမ္မတ Michael D. Higgins က O’Riordan ဟာ အိုင်းရစ်ဂီတလောကမှာ အရှိန်အဝါကြီးမားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သူမကွယ်လွန်သွားခြင်းဟာ ဂီတလောကအတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။
The Cranberries had an immense influence on rock and pop music in Ireland and internationally. I recall with fondness the late Limerick TD Jim Kemmy’s introduction of her and The Cranberries to me, and the pride he and so many others took in their successes. To all those who follow and support Irish music, Irish musicians and the performing arts her death will beabig loss. Irish Times
O’Riordan ဟာ Cranberries အဖွဲ့နဲ့အတူ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ သူတို့ရဲ့ ပွဲဦးထွက် Album ဖြစ်တဲ့ Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ No Need To Argue Album နဲ့ Linger, Zombie လို Single တွေဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ Cranberries အဖွဲ့ဟာ သူတို့အဖွဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ခွေပေါင်း သန်း ၄၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီး ဆုပေါင်းများစွာဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၄၆ ဆိုတာ ငယ်လွန်းပါသေးတယ်..O’Riordan လို ပါရမီရှင်တစ်ယောက် ဒီလိုအကြွေစောခဲ့တာဟာ အနုပညာလောကအတွက် အစားထိုးလို့မရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့သီချင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ Generation တစ်ခုလုံးရဲ့ ဝမ်းနည်းနှမြောတမ်းတသံတွေကို O’Riordan ကြားနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ O’Riordan တစ်ယောက် ကောင်းရာသုဂတိလားပြီး နောင်ဘဝတွေမှာ သူမနှစ်သက်တဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ စိတ်တိုင်းကျလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: Zayn Malik ဆီသို့ Deadpool ပို့တဲ့ အမှန်အကန်ခွီရတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းစကား
NEXT POST Next post: Maroon5နဲ့ BTS တို့ Collaboration လုပ်ကြမှာလား